macOS 11 Big Sur: yazvino vhezheni, matambudziko & mitsva maficha eMacs
Inotevera Mac inoshanda system inonzi Big Sur uye yakasvika musi wa12 Mbudzi. Hezvino zvese zvaunoda kuti uzive nezve iyo nyowani vhezheni - uye matambudziko vanhu (kusanganisira isu!) Vari kuiisa.
Kana iwe uri kushamisika nezve zita iri: Big Sur inzvimbo ine makomo muCalifornia. Pane chimwe chinhu chekutaura pamusoro pezita: haisi macOS 10.16 sezvaungave uchitarisira. Ndiyo macOS 11. Pakupedzisira, mushure memakore angangoita makumi maviri, Apple yakachinja kubva ku macOS 20 (aka Mac OS X) kuenda kuma macOS 10. Izvi zvakakura!
Takatarisa izvo zvitsva muBig Sur - heino mutongo wedu: MacOS Big Sur: unofanira here kugadzirisa yako Mac?
Big Sur kuburitsa zuva & nguva
Sezvataitarisira, Apple 10 Mbudzi 'Chimwe Chimwe Chinhu' chiitiko yakatamba yakamirira kune yekutanga wave yeApple Silicon-powered Macs uye ikatipa iro rekuburitsa zuva reMacOS Big Sur - China, 12 November. macOS Big Sur yabuda izvozvi!
Hausi kuona Big Sur? Iwe unofanirwa kuona yambiro kubuda pahwindo rako kuburikidza Notification Center, kana iwe ungafanira kuenda kuSoftware Kugadziridza kuburikidza neSystem Preferences (nekudzvanya pane Apple logo kumusoro kumusoro kuruboshwe). Kana iyo yekuvandudza iripo iwe uchaiona.
Kana iwe uchiri kusakwanisa kuzviona tinya pane izvi batanidzo yeBig Sur pane Mac App Store.
Matambudziko kurodha pasi / kuisa Big Sur
Big Sur yanga iri imwe yematambudziko ekugadzirisa macOS emakore apfuura. Kwete chete isu takasangana nematambudziko nekutora, kumisikidza raive dambudziko hombe nekuti Big Sur inoda 35GB yemahara nzvimbo kuisa. Tine rombo rakanaka hazvo - tiri kuzvinzwa Big Sur iri kuita zvidhinha mamwe 2013-2014 MacBook Pro mamodheru.
Dai iwe uri mumwe wevatanga kurodha pasi iwe unenge waona kuti kurodha pasi kwaishamisa zvisingaite. Zvinoitika kuti maseva eApple akadonha musi waakaburitswa.
Idzo ingori mashoma eayo akawanda nyaya. Kana iwe uine chero matambudziko ekuisa Big Sur verenga Kugadziriswa kweMacs ayo asingazogadzirise macOS.
Ndeapi maMac anomhanya Big Sur?
Aya maMacs achakwanisa kumhanyisa Big Sur:
MacBook mamodheru kubva kutanga kwa2015 kana gare gare
MacBook Air mamodheru kubva 2013 kana gare gare
MacBook Pro mamodheru kubva 2013 kana gare gare
Mac mini mamodheru kubva 2014 kana gare gare
iMac mamodheru kubva 2014 kana gare gare
iMac Pro (ese mamodheru)
Mac Pro mamodheru kubva 2013 kana gare gare
Nekudaro, cherekedza iyo mishumo iyo 2013-2014 MacBook Pro's iri kuverengerwa neBig Sur, sezvataurwa pamusoro apa. Zvakare rangarira kuti iwe unozoda nezve 35GB yemahara nzvimbo kana iwe uchinge warodha pasi iyo 12.2GB Big Sur usati waigona kunyange kuiisa, zvakare yataurwa pamusoro.
Paive nemamwe maMac akatsigirwa neMacOS Catalina. Muna 2019 iwo MacBook Air uye MacBook Pro mamodheru kubva pakati pa2012, Mac mini kubva kunonoka 2012 uye iyo 2012 iMac yakatsigirwawo.
YakachenaMyMac X | Tarisa mukati memacOS yako
tenga kubva kuMacPaw
Tsvaga junk yakavanzika, mahwendefa mahombe ekare, maapplication ekumashure, uye inorema memory vatengi Shandisa CleanMyMac X kusunungura nzvimbo pane yako Mac uye tune iyo yekumhanyisa kumhanya. Iyo nyowani vhezheni inobudirira inovhara adware, browser pop-ups, uye hutachiona hwekuwedzera.
Dhawunorodha yemahara edition 2020
Chii chitsva muMacOS Big Sur?
Sezvatatsanangura pamusoro apa, Apple inofunga Big Sur chiitiko chakakura chakakwana icho chave chafamba kubva paMacOS 10 kuenda paMacOS 11. Nekudaro, kana iwe uri kutarisira sisitimu nyowani yekushandisa ipapo ungangodaro unoodzwa mwoyo. Chokwadi Apple yakapihwa ma icon uye maapplication zvishoma, asi kazhinji hapana chero chinhu chakasiyana zvakasiyana… kunze kwekunge watarisa kumashure kwezviitiko.
Sezvo isu tichitsanangura mune yedu chinyorwa nezve Apple's sarudzo ku mugomba Intel uye wotanga kushandisa ayo maprosesa mukati meMacs - inozivikanwa seApple Silicone kana iyo M1 - iyi vhezheni ye macOS ndiyo yekutanga vhezheni iyo inogona kumhanya pane iyo nyowani Apple Silicon Macs (dzimwe nguva inotsanangurwa seARM Macs). Imwe yemhedzisiro huru yeshanduko iyi ndeyekuti iwe unozokwanisa kumhanyisa iOS maapps pane anotevera Macs anoshandisa idzi nyowani Apple Silicon machipisi.
Tsvaga zvimwe nezve shanduko muBig Sur uye kuti inofananidzwa sei neCatalina pano: macOS Big Sur vs Catalina: Zvichava zvakakosha here kukwidziridzwa?
Dhizaini & Yemukati Shanduko muBig Sur
Big Sur iri, sekureva kwaApple, "Iyo hombe dhizaini kusimudzira kubvira pakaunzwa Mac OS X". Izvo zvinotirova isu sechirevo chikuru, zvichipiwa shanduko dzakauya neOS X Yosemite muna 2014, apo iyo yekutanga Aqua interface yakatora kumeso, kutaridzika kwazvino uno. Tine chokwadi chekuti iyi ndiyo chikuru dhizaini shanduko - pamwe Apple ine ndangariro pfupi.
Apple inoti zvigadzirwa zvemadhizaini zvinofanirwa kunge zvakajairika uye zvakafanana neIOS, yaive meseji yeshanduko muna2014 - pachezvayo zvichibva neshanduko idzo dzakatamba muIOS. (sezvinoonekwa muDock), zvichiratidza kuti vakagadzirwazve (pazvinenge zvakakodzera) kuti vanyatsoenderana nezvidhori zvinoonekwa pane zvimwe zvigadzirwa zveApple. Asi chete kana iwe uchifunga kuti Apple yachinja mifananidzo yako yaunoda zvakanyanya, usatya, kambani inoti vanozochengetedza yavo "Mac hunhu".
Zvisinei neshanduro yakakura sei, dhizaini nyowani inoitirwa kuti kufamba kuve nyore uye kunounza nemazhinji maitirwo ayo vashandisi veIOS nePOSOS vanozoziva, kusanganisira new Control Center, shanduko kuNotification Center, uye shanduko. kunyorera maapplication; iyo yatichatarisa mune zvakadzama zvinotevera.
Kubva pakauya beta, isu takadzidza nezve shanduko iri kuuya iyo inokanganisa Rima Mode. Kuchave nechengetedzo nyowani yekudzima hunhu iko windows rega ruvara kubva kumashure rivhenekere nepakati. Izvi zvinofanirwa kureva kuti Rima Mode haina kuvhenekerwa nemamwe maapplication auri kumhanya.
Shanduko hadzirege kumira nezvidhori mudoko, iwe unowana zvakare yakazara-kureba mativi emabara uye shanduko kubha rekushandisa mune maapplication, ayo Apple anoti anopa maapplication kutarisika kwakachena.
Mapikicha eApp anotora chimiro chakafanana, pamwe nekusagadzikana kukuru kupokana neayo eApp uye epadesi.
Kudzora Center yeMac
Ichi chaive chaicho chimwe chedu shanduko dzaidikanwa kwazvo dzeMacOS. Control Center inoita kuti zvive nyore kwazvo kudzora maPhones edu uye maPads, uye kuunza mashandiro akafanana kuMac pasina mubvunzo kunogamuchirwa.
Iwe unokwanisa kugadzirisa Control Center - iyo inogara mubhari yemenu - uye kushandisa mukana wekukurumidza kuwana kune akakurumbira madhiraivhu, akadai seWi-Fi neBluetooth masetingi, kutamba mimhanzi, kupinda kune Rima Mode uye nezvimwe.
Heino izvo zvaunoda kuziva nezvazvo uchishandisa Control Center paMac.
Notification Center yakagamuchirawo kutarisisa. Iyo inounza yakawanda inopindirana notices uye yakagadzirwazve majeti. Iwe uri kugona kuwona ako ese Notices uye mawijeti pamwechete, neZiviso zvakakamurwa neapp uye akawanda anopindirana. Mune dzidziso, iwe unogona ikozvino kutamba podcast episode yakananga kubva kuNotification Center pachayo.
Widgets inowanikwawo musarudzo yemhando nhatu kuitira kuti utore iyo inokodzera iwe. Verenga zvimwe nezve mashandisiro ekushandisa majeti paMac pano.
Nyowani & Yakavandudzwa Mapurogiramu MuBig Sur
Semazuva ese, Apple iri kutora ino sisitimu yekuvandudza semukana wekugadzirisa ayo ekuzvarwa Mac maapp.
Mumakore achangopfuura Apple yanga ichifambisa maapps kuenda kuMac kubva kuPadOS uchishandisa Catalyst; seti yaro yehurongwa iyo inoita kuti mapurogiramu ekushandura ave nyore. Kutenda kuCatalyst, muCatalina takawana Mumhanzi, Podcasts uye maapplication eTV. Ino nguva Safari, Meseji neMamepu vese vakagamuchira kurapwa kweCatalyst. Tichamhanya nepasi pega pazasi.
Haisi ingori interface yakagadzirwazve hombe. Apple inoti Safari yakagamuchira kuvandudzwa kwayo kukuru kubvira payakatangwa newebhu webhu, muna 2003.
Zororo iri harisi rekugadzira chete, zvakadaro. Safari yatokurumidza, uye zvinoenderana neApple ikozvino yave 1.9x inoteerera, inomhanya paApple Silicon-inogoneswa Macs. Iyo kambani inoti iyo Safari inotakura inowanzo shanyira masosi avhareji ye50 muzana nekukurumidza kupfuura Chrome.
Kune akatiwandei ekuchinja shanduko anotora iyi nyowani Safari, asi pamwe imwe yeakanyanya kugona kugona kugadzirisa peji rako rekutanga. Iwe unokwanisa kusarudza yepamoyo mufananidzo (iyo inogona kuve yako wega pikicha) uye wobva wawedzera zvikamu senge Kuverenga Chinyorwa, Favorites, iCloud Tabs uye Siri Mazano, saka ivo vanogona kuwanikwa nyore.
Tabs yakagadzirwazve, iwe unokwanisa kuona mamwe ma tabo pahwindo uye ivo vava kuratidza favicons nekumira. Asi kuti zviite nyore kuziva yakavhurika tabo iwe zvakare unokwanisa kuona kukurumidza kufanoona peji nekungotenderera pamusoro petabhu. Imwe yeedu Wishlist zvikumbiro yaive yekuti Akabayirwa Tabs anowana yavo yega bhawa sezvo yedu inotora yakawanda nzvimbo zvekuti hatina yakakwana nzvimbo yemathebhu. Izvo zvakaitwa naApple zvinoita kunge inowedzera dhizaini dhizaini.
Kugona kweSafari kushandura mapeji ewebhu mumutauro wako (kubva mitauro minomwe) - kunofanirwa kuita kuti kufamba pawebhu kuve nyore, kana uchiwanzozviwana iwe pamapeji ewebhu mune mimwe mitauro. Isu tinoda kuti hazvichadiwe kupurukira kuGoogle Dudziro kuti uwane zvinotaurwa nepeji. Apple inoti unokwanisa kudzvanya pakushandura kuti uone mumutauro wako - uye inoshandura munguva chaiyo - kunyangwe kana zvinyorwa zviri papeji zvikagadziridzwa. Verenga pamusoro pekushandura mapeji ewebhu pano.
Big Sur zvakare inounza 4K YouTube kuMac (chero bedzi iwe uchishandisa Safari). Pakutanga, Apple yaisatsigira vp9, vhidhiyo codec inoshandisa Google ye4K vhidhiyo - asi zvinoita sekunge yakachinja moyo.
Kuwedzeredzwa kwakagashirawo kutarisisa muBig Sur uye vanowana yavo yega chikamu muMac App Store.
Uine kuvanzika uye kuchengetedzeka mupfungwa, vashandisi vanokwanisa kusarudza kuti ndeapi uye ndeapi mawebhusaiti ekuwedzeredzwa kweS Safari anogona kushanda nawo, futi.
Kuenderera mberi nemusoro wenyaya wega unokwanisa kuona Chakavanzika Chinyorwa chewebsite yega yega yaunoshanyira, padhuze neNewweekese Chakavanzika Chinyorwa pane peji rako rekutanga chinoratidza izvo Safari zvave zvichikuchengetedza kubva pawave kubhurawuza.
Chimwe chimwe chakavanzika-chekutanga chinhu chitsva chekutyora password yekutarisa zvinoshandiswa izvo zvinofanirwa kuona kuti password yako ruzivo haina kumbobvira yafumurwa - uye kana zvirizvo, Apple inokuzivisa iwe uye kubatsira kuvandudza navo newe.
Meseji ndeimwe yezvazvino maapplication ekuti atakurwe kubva kuIOS kuenda kuMac nekutenda kuMac Catalyst - maturusi akaunzwa naApple kumashure muna2019 kuti zvive nyore kuunza maappa iPad kuMac. Nekuda kweizvozvo, Meseji pane macOS inozowana iyo yakazara seti yeIOS maficha ekurumbidza iyo iOS 14 / iPad OS 14 shanduro. Izvo zvinhu zvitsva zvinosanganisira:
Iko kugona kwePin kutaurirana iwe kwaunoda kuchengeta kumusoro kwehwindo (zvakafanana nemabatiro atingaita pini manotsi kumusoro kwechiso)
Iko kugona kwekugadzira mufananidzo wekumiririra boka rako kusanganisira mifananidzo yeavo vanobatanidzwa
Chinhu chinobatsira kana iwe uri mumagwaro eboka, unokwanisa kutumira mhinduro dziri mukati. Zvinoreva kuti iwe unogona kupindura kune yakataurwa pane kuwedzera chirevo chako pasi pemurwi.
Kana iwe uchida kuve nechokwadi chekuti mumwe munhu haashaye meseji yako iwe unogona 'kutaura' ivo - ingo nyora zita ravo - uye ivo vanozoona yambiro.
Iwe unogona zvakare kumisikidza saka iwe unongo ziviswa chete kana iwe ukataurwa.
Zvimwe zvinhu zvinobva kuApp app zvinosanganisira Memoji dhizaini maturusi (pamwe nekuwedzeredzwa makumi maviri ebvudzi nesarudzo dzemusoro, kusanganisira masiki.Uye kune zvitatu zvitsva zveMemoji, kusanganisira chibhakera.
Kune zvakawanda zvimwe zvinhu zvinouya kuMessage, uyezve izvo zviripo maficha - sekukwanisa kuwedzera zvinonakidza zvinhu zvakadai semabhaluni uye confetti kumagwaro - tsungirira futi.
Apple's Mamepu app yakagamuchirawo iyo Catalyst kurapwa, saka inofanira kunge iine iOS-senge iwe paunoshandisa paBig Sur.
Izvi zvinoreva kuti Mamepu paMac anowana zvitsva Mamepu maficha anowanikwa muIOS 14 uye iPadOS 14; kusanganisira kuuya kweiyo nyowani-dhizaini Mepu kuUK, iyo pachayo inosanganisira maficha senge 360-degree kuona kwekuenda neRuka Around.
Mamepu anotarisa pane "Kukubatsira kuti usvike ikoko nenzira iri nani kupasi", saka tarisira kuona mafambiro emabhasikoro, nzira yekukubatsira iwe kuenda kune imwe nzvimbo kunochaja mota yako yemagetsi uye zvimwe mumutsipa iwoyo.
Iwe zvakare uchawana madhairekitori kubva kune ese maviri akavimbika zviwanikwa anogadzirwa nevamwe vashandisi. Apple inoti unogona kugadzira magadzirirwo etsika emaresitorendi aunofarira, mapaki uye nzvimbo dzezororo, izvo zvinogona kugovaniswa neshamwari uye nemhuri.
Iwe zvakare unokwanisa kutarisa zvakadzama zvemukati mepu enhandare huru nendege dzekutengesa.
Chengetedzo & Yakavanzika Zvimiro
Apple inoti yakafuridzirwa nekureruka uye kuverenga kwemavara ezvekudya kuti vagadzire nzira nyowani yekuratidza kuti ndeupi ruzivo runodiwa neMac App Store maapp. Semuenzaniso, unokwanisa kuona kana iyo app ichiunganidza data rekushandisa, ruzivo rwekuonana, kana data renzvimbo uye kuti inoigovana nevechitatu mapato. Izvi zvinobatsira vashandisi kuti vanzwisise zvakavanzika zvemaapps usati waadzora, anodaro Apple.
Zvese zvaunoda kuti uzive nezve macOS Monterey
Maitiro ekuvandudza macOS: Gadziridza kuBig Sur kubva kuCatalina